Nandraviravy vola saika hanao kolikoly: teratany sinoa iray sy ny mpandika teniny nosamborin’ny polisy | NewsMada
Nandraviravy vola saika hanao kolikoly: teratany sinoa iray sy ny mpandika teniny nosamborin’ny polisy
Par Taratra sur 10/09/2020
Voasambotry ny polisy ny alakamisy teo ny lehilahy teratany sinoa sy ny mpandika teniny noho ny raharahan-kolikoly.
Araka ny fantatra, nanafatra vatafahitalavitra tsy misy marika avy any ivelany ireo roa lahy. Nokasainy hasiana marika antsokosoko eto an-toerana ireo entana nohafarana, vao hamidy sy haparitaka. Fihetsika sy toe-javatra tena voarara ary tsy ara-dalàna mihitsy izany.
Rehefa nahare ny vaovao ny eo anivon’ny minisiteran’ny Varotra, etsy Ambohidahy, nampiantso ity teratany sinoa ity sy ilay mpandika teniny, ny alakamisy teo. Araka ny voalazan’ny tatitra avy amin’ny Polisim-pirenena anefa, niezaka nandamin-dresaka tao izy ireo, ary nikasa handraviravy vola hanao kolikoly. Vokatr’izany, nametraka fitoriana teny amin’ny kaomisarian’ny polisy, boriborintany I, Analakely, ireo tompon’andraikitra ao amin’ny minsiteran’ny Varotra. Taorian’izay, nosamborina ary noraisim-potsiny tetsy Ambohidahy ilay teratany sinoa sy ilay mpandika teny niaraka aminy hanaovana fanadihadiana sy famotorana. Nandritra izany, mbola niezaka nandraviravy vola sy nanambitamby ireo polisy nanao famotorana ihany izy roa lahy. Nandà izany hatramin’ny farany anefa ireo mpanao famotorana.
Nirosoana lalindalina ny fanadihadiana, ary natao ny fanagiazana ireo vatafahitalavitra saika hanaovan’izy ireo ny teti-dratsiny. Nogiazana, tahaka izany, koa ireo lelavola mitentina 280 000 Ar saika handraviravezany ireo mpanao famotorana tamin’ny alalan’ny kolikoly. Raha ny fandehan’ny raharaha, voaporofo fa nikasa, na efa tena nanao, kolikoly mihitsy ity teratany sinoa sy ilay mpandika teniny ity. Heloka voararan’ny lalàna manankery eto amin’ny firenena.
Aorian’ny famaranana ny fanadihadiana sy ny famotorana ity raharahara ity, voalaza fa hatolotra tsy ho ela ny mpitsara mpanao famotorana izy roa lahy ireto. Manantitrantitra ry zareo eo anivon’ny Polisim-pirenena fa heloka voararan’ny lalàna ny kolikoly ka misarika ny sain’ny rehetra tsy ho tafaroboka amin’izany. Tsy ny mpanome ihany fa izay mandray koa, mety hiharan’ny sazy.